Esi zụlite ezigbo nwoke
O doro anya, nrọ ọ bụla nwa agbọghọ na-ezute ya "ezigbo nwoke". N'eziokwu, onye nke ọ bụla na-etinye ihe n'okwu nke aka ya, n'ihi na onye ọ bụla n'ime anyị nwere echiche nke aka ya "nke ugbu a." Ma ndị ikom a mara mma adịghị ada site na mbara igwe, ha na-eme ha. Nke a bụ ndị mụrụ ya. Ya mere olee otu ị ga - esi zụlite "ezigbo mmadụ" site na nwatakịrị? Ka anyị ghọta. Mgbe mbụ ị na - eburu obere obere ihe gị, ọchịchọ mbụ gị bụ ichebe ya, chebe ya pụọ ​​na nsogbu na nsogbu, ahapụla onwe gị maka nke abụọ. A sị ka e kwuwe, ụwa gbara gburugburu dị oke egwu, nwa gị dị obere, na-enweghị mmasị na onye na-enweghị nchebe. N'ezie, n'ime afọ mbụ nke ndụ nwatakịrị, na karịsịa na ọnwa mbụ, nwa gị na-adabere kpam kpam n'ebe ị nọ, ọ pụghị ime ihe ọ bụla n'onwe ya. Ma oge na-aga, yana ya na enwere mgbanwe na nwa gị: ọ na-etolite, na-enweta ikike na ikike ọhụrụ. Ọ mụtaworị otú e si edebe isi ya, mana maka oge mbụ ọ nọdụrụ ala ma daa, ezé mbụ ahụ apụtawo, nwa ahụ na-ebute nzọụkwụ mbụ ya ma ghọta na nwa gị adịghị dị ka onwe ya dịka ọ bụ nanị ọnwa ole na ole gara aga. Ọ na-amalite igosipụta àgwà ya, ọ nwere echiche nke ya na ọchịchọ ya, nke nwere ike iche na nke gị.
O nweghị njikwa
Ụfọdụ kweere na "ụmụ mama" na-eto site na ụmụ nwoke ndị a hụrụ n'anya nke ukwuu n'oge ha bụ nwata. Nke a abụghị eziokwu. Ọhụụ nke mmadụ agaghị enwe ike ịhụ n'anya, ọ bụ naanị ihe ọzọ. Ma, ọ dịghị mkpa ka ị gbakọọ nwa ahụ na-atụ egwu ma kwụchie ya dị ka nnekwu ọkụkọ na ọkụkọ, na-achịkwa nzọụkwụ ọ bụla. Mgbe ụfọdụ, ọ bara uru ịhapụ nwatakịrị ahụ naanị otu oge, n'ihi na ọbụna nwata a chọrọ ohere ya na oge maka ọmụmụ ihe onwe ya na ihe ọmụma nke ụwa gbara ya gburugburu.
Nna na nwa
Ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ mere nnyocha na nkà mmụta sayensị Russian ma chọpụta na ajụjụ kachasị ike na nke na-adịghị mma maka ụmụ akwụkwọ ọta akara bụ: "Ị hụrụ nne gị ma ọ bụ nna gị n'anya karị?" Otu nwanyị na-eme ngwa ngwa jiri eziokwu ahụ bụ na nwa ya nwoke na-anọ mgbe niile, n'ihi na ọ na-anọ nanị ya na nwa 23 ọ bụla n'ime 24 ọ ga-ekwe omume. Papa na-arụkwa ọrụ nke abụọ ma dịka ọ bụrụ na ị na-eburu nri: na-egwuri egwu na nwa ahụ mgbe ị na-arụ ọrụ nri, na-agbanwe agbanwe ya, na-aga ijegharị na mkpanaka ahụ, n'ihi ya ị nwere ike ịchekwa obere oge gị. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na mgbe nwatakịrị na-etolite, ị malitere ịmalite inwe obiụfụ nke nwatakịrị ahụ n'ebe nna ya nọ, mgbe nwatakịrị nwere obi ụtọ dị ukwuu malite igwu egwu nna ya ma ọ bụ mgbe ha na-agbagọ ma na-akpọ "shchekokalka" na nwata ahụ na-achị ọchị ma na-akwa nna. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka nwa ghara ịghọ "nwa nne," ma tolite ka ị bụrụ ezigbo mmadụ, mgbe ahụ, ị ​​gaghị etinye aka na ha. Ha ga-enwe oge ha nwere ike ịnọ naanị ha, na-enweghị gị: gaa ebe ị ga-eje ije, gaa n'osimiri ma ọ bụ ịkụ azụ, gaa n'ọhịa maka mushrooms ma ọ bụ n'ogige ntụrụndụ iji zụọ ọbọgwụ ahụ, iji tinye aka n'omume ụmụ nwoke. Nke mere na nwa ahụ nwere ike isoro nna ya kerịta ụfọdụ n'ime ihe omimi ya, ọ bụghị inye gị ya. Nke mere na nna nwere ike ịgwa nwatakịrị akụkọ banyere ndụ ya, nke nwa ahụ nwere ike ịmụta na ịghọta ihe ọma na ihe ọjọọ. Gwa m na ọnọdụ ndị ọ bara uru ịlụ ọgụ, na ebe ị ga-achọ ịgbachi nkịtị ma gafee ma ọ bụ otu esi eme ka nwa agbọghọ ị hụrụ n'anya chọrọ ịbụ enyi ya, nna kwesịrị ịgwa kpọmkwem. N'ihi ya, a na-eguzobe mmekọrịta ntụkwasị obi n'etiti nna na nwa.
Mmekọrịta na ezinụlọ
Ụmụaka na-etinye ihe ọmụma niile dị ka ogbo. Ha emebeghị ka àgwà ha dịrị ụwa gburugburu ha, ya mere, ha na-eṅomi omume nke ndị okenye, karịsịa ndị mụrụ ha. Ọ dịghị mkpa ọzọ iji dozie ya na nwunye nke ọnọdụ ahụ ma chọpụta mmekọrịta ahụ - n'eziokwu nwa ahụ na-ahụ ihe niile, mmetụta dị otú ahụ na-ezighị ezi na-emetụtakwa ọnọdụ ya na psyche. Ọ bụrụ na nwatakịrị hụrụ otú ndị nne na nna si elekọta onwe ha, a na-emeso ya na nghọta na ịhụnanya, mgbe ahụ na ụdị a nwata ahụ ga-anọgide na-ewere maka iwu.
Ndị mmadụ anaghị akwa ákwá
Ha na-eti mkpu, ma, ma ọ bụrụ na ọ bụ nwatakịrị. Ọ bụ naanị ụzọ iji gosipụta ọnọdụ na mmetụta gị. Ma ọ bụrụ na site n'oge ọ bụ nwata ka ọ na-ebuga nwata, ọ bụ nanị ụmụ agbọghọ nwere ike ibe ákwá, ọ na-etinye ike na nlelị maka anya mmiri na ọdịdị nke nwoke n'ọdịnihu. Mgbe ahụ, anyị ndị inyom, anyị onwe anyị na-echekwa ihe kpatara nke a bụ nwa okorobịa anyị ji daa ụra ma ọ bụ ka njọ, amalite iwe na iwe mgbe anyị na-eti mkpu. Ihe ọ bụla sitere na nwata na àgwà ọjọọ.
N'ụzọ dị mwute, anyị nwekwara ụdị ọzọ - na nwatakịrị ahụ kwesịrị ịkụziri ya na ọ dị njọ, ọ dị obere ka a na-eto ya na nkụda mmụọ, nke ka mma. Mgbe ahụ, anyị na-eti mkpu na ndị ikom anyị nọ na-eche oyi ihu. Atụla egwu ịkwado nwa ahụ maka ọrụ ọma dị iche iche. Ma ọ bụrụ na ị mejọrọ nwa ahụ na mberede - ma ọ bụ tie mkpu, n'ihi na ihe niile na-eme - mgbe ahụ ị kwesịrị ịjụ nwata ahụ maka mgbaghara ma kọwaara ya ihe mere i ji eme ụdị ahụ (ike gwụrụ, echeghị echiche). A sị ka e kwuwe, ikike ịkwa ụta na ọmịiko agaghị eme ka nwa gị ghara inwe obi ike, mana ọ ga-aga n'ihu ya.
Ụdọ - ọ bụghị mgbe niile ka ụzọ dị mma
Ndị na-akwado na ndị iro nke "inye belt" nwa na-eto eto, o yiri ka ọ gaghị achọta asụsụ nkịtị. N'agbanyeghị nke ahụ, agbala ọsọ na akpa akpa nwa ahụ. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ amalite ịkpa àgwà ọjọọ, gbalịa ịkọwapụta ihe doro anya nke ihe a na-ahapụ, mgbe ị gafechara nke a, a ga-etinye usoro ntụpọ n'ọrụ. Mana ihe a nile ka ekwesiri ighota nwatakiri ahu, na oburu na o me kwa otu uzo ozo, agiri ya ahuhu. A ghaghị ịmara nwa ahụ, ihe mere eji taa ya ahụhụ na ihe kpatara ya. Ma ọ ka mma ịnwa ime ma ọ bụrụ na ejighi ike anụ ahụ mee ihe. A sị ka e kwuwe, ịsọ mpi nwere ike ịmalite ime mkpesa. Nke a bu otua, na otutu ndi mmadu, a na amu ndi isi ike.
Ọ bụrụ na ị zụlite nwa, ị nwere ohere pụrụ iche - iji nye ụwa mmadụ kwesịrị ekwesị. Otu ụbọchị otu nwa agbọghọ ga-asị gị: "Ekele gị, nwa gị nwoke bụ ezigbo nwoke!".
Kedu esi eme ka nwatakiri nwere akwukwo?
Esi zụlite nwa nwoke dịka nwoke, ọ bụrụ na ị bụ nne naanị ya
Kedu ihe ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ dị oke?
Gini mere nwatakiri ji eme ihe ike?
Olee ot 'u nne na nna ga - esi jiri oge ha na um u ha na-an okwu?
Otu esi emeghachi omume nye ndị nne na nna na akara ule
Otu esi eme ka nwata nwee obi eziokwu
Nduku ofe na mushrooms
Echiche banyere ịhịa aka na Swedish na uru ya
Mara mma ma na-emetụ nwa agbọghọ ahụ aka n'amaokwu ma na-edegharị ya
Tatyana Navka kwuru banyere ụmụ amaala America
Otu esi echekwa ohia
Nkwenkwe ụgha, nkwenkwe, ihe ịrịba ama, mmalite na ihe ọ pụtara
Nnukwu yogi nke oge ochie India
Nlekọta nke pusi Sphynx
Ncheta nke ntaramahụhụ mgbe ị bụ nwata
Nhọrọ nke ọkpụkpọ kacha mma maka agbamakwụkwọ ahụ
Ngwọta ndị na-adịghị na-agwọ ọrịa nke adenoids n'ime ụmụaka
Atụmatụ nke cosmetologist maka nlekọta anụahụ
Salad na tuna na akwa
Ruo ole afọ ole ka nwatakịrị chọrọ ka ọkpụkpụ?
Ihe mmiri ara ehi na-eme ka mmiri na-egbu ya na dysbacteriosis